Ungayilandela njani imixholo enomdla kuthi kuGoogle Ukufumanisa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukondla kukaGoogle kwaba kukuFumanisa kukaGoogle kwiinyanga ezidlulileyo, ukudibanisa uthotho lwemisebenzi emitsha. Enkosi kweli nqaku sinakho fumana iindaba ezinomdla kuthi. Nangona ngaphezulu kwesihlandlo esinye sifumana into esingayithandiyo okanye sinomdla kuyo. Ngethamsanqa, sinako ukumisela izihloko esifuna ukuzibona. Kukusebenzisa bhetele lo msebenzi.
Ngale ndlela, wonke umsebenzisi we-Android une ukubanakho ukwenza ngokwezifiso iGoogle Discover. Ke ngoko, ziya kuboniswa kuphela ziindaba ezinomdla kulo mntu. Eyona nto intle kakhulu kukukwazi ukumisela oku kwisixhobo kwaye ngenxa yoko zibe nezihloko eziqinisekileyo esizifumana zinomdla wokwenene.
Ngale ndlela, lokanye into ekufuneka siyenzile kuGoogle ukufumanisa kukulandela izihloko. Sifumana inani elikhulu lezihloko ekufuneka zilandelwe kwesi sixhobo. Into ekufuneka uyenzile emva koko kukukhetha ezo zihloko zinomdla kumsebenzisi kwaye uzilandele, ukwenzela ukuba iindaba ezikwesi sihloko okanye udidi zamkelwe.
Kwakhona, singayeka nokulandela ezinye zezihloko ikhona ngoku, kodwa asinamdla. Ukuba awufuni ukubona iindaba malunga nemidlalo, unokukhetha le ndlela ilula, uyeke ukubonisa iindaba malunga nemidlalo kwifowuni yakho. Konke oku kulula ukumisela kwaye kwenziwe i-100% ngokwezifiso, yiyo loo nto yenza ukuba kube lula ngakumbi.
Landela izihloko kwiGoogle Discover
Into yokuqala ekufuneka siyenzile vula iGoogle Discover feed feed kwifowuni yethu ye-Android. Xa singaphakathi, kufuneka sivule imenyu yokukhetha. Ukwenza oku, cofa kwi icon enamachaphaza amathathu akwindawo ephezulu yesikrini. Emva koko, kuthotho lwezinto ezinokukhethwa ziya kuvela kwiscreen. Eyona inomdla kuthi yile ibizwa ngokuba yi-Personalize Discover, apho sicofa khona.
Eli candelo liza kuvula kwiscreen sefowuni. Siza kubona ukuba icandelo lokuqala eliphumayo libizwa ngokuba kukulandela, lelo elinomdla kuthi. Emva koko nqakraza kwicandelo elibizwa Bona zonke iisetingi, ukuze zonke iinketho zivele. Okulandelayo, kufuneka singene icandelo elibizwa Landela izihloko, ke sicofa ukungena. Ngoku sifikelele kwiscreen apho sinokulandela khona izihloko esizifunayo.
Ngale ndlela, sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo. Sinokufikelela kulo naluphi na udidi olucetywayo, ukuze sikwazi khetha izihloko zethu esizithandayo ukuba silandele kuGoogle Ukufumanisa. Nangona sinethuba lokuzikhangela, ukuba le sinomdla kuyo ayibonwa kwiscreen. Ukwenza oku, kuya kufuneka usebenzise injini yokukhangela, ucofe i icon yeglasi ezenza nkulu phezulu kwesikrini. Xa ufumene umxholo ofuna ukuwusebenzisa, kuya kufuneka ucofe uphawu + ngasekunene kwawo, ukuze siqhubeke nalo mxholo.
Nje ukuba sikhethe zonke izihloko ezinomdla kuthi, sibuyele kwiscreen sasekhaya kwaye ucofe kwiqhosha elilungile. Ngele ndlela, iinguqu esizenzileyo kuGoogle Discover sele zigciniwe. Oko kuthetha ukuba iindaba ziya kuboniswa kuphela kwezi zihloko siziphawule zinomdla, kwezi zihloko sizilandeleyo. Indlela elungileyo yokuhlala unolwazi ngezi zihloko zinomdla kuthi.
Ukuba into oyifunayo kukuyeka ukulandela isihloko, kulula kakhulu. Kwicandelo apho ungabona khona izihloko esizilandelayo kuGoogle Ukufumanisa, ecaleni kwesihloko ngasinye sibona ukuba kukho u-X. I-icon ebekwe ngasekunene kwegama lomxholo. Ukuba sifuna ukuyeka ukulandela isihloko esithile ngaxa lithile, kufuneka sicofe u-X. Ke esi sihloko sisuswe ngokusisigxina kwiprofayili yethu. Kulula kakhulu ukuyeka ukulandela izihloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyikhetha njani imixholo oza kuyilandela kuGoogle Ukufumanisa